August 2021 - Achawlaymyar
အသကျ3နှဈအရှယျမှာတှဆေုံ့ခဲ့ကွပွီး ခဈြသူသကျတမျး 23 နှဈအကွာမှာ လကျထပျယူခဲ့ကွတဲ့ စုံတှဲလေး
August 31, 2021 by Achawlaymyar
မွငျမွငျခငျြးအခဈြ လို့ချေါတဲ့ ခဈြစရာပုံပွငျတဈပုဒျအဖွဈ ချေါဝျေါတဲ့ ဗီယကျနမျစုံတှဲနှဈဦးရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးကို ဝမြှေပွီးတဲ့နောကျ မြားစှာ ပြံ့နှံ့သှားခဲ့ပါတယျ ။ သူတို့စုံတှဲဟာ အသကျ ၃ နှဈကတညျးကစပွီး ၂၃ နှဈအကွာ တှဲလာခဲ့ကွတာဖွဈပွီး နောကျဆုံးမှာ သူတို့တှေ တကယျလကျထပျခဲ့ရပါတယျ ။ ဒီအကွောငျးက Hung လို့ချေါတဲ့ ကောငျလေးဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၃ နှဈက သူ့ရဲ့ ၃ နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာ မိဘတှကေ သူ့အတှကျမှေးနပေ့ါတီတဈခုကို စီစဉျပေးပွီး သူ့ဖခငျရဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ဖိတျခဲ့ပါတယျ ။ သူငယျခငျြးရဲ့ဖခငျက သမီးဖွဈသူ Lily ကို Hung ရဲ့မှေးနပေ့ါတီသို့ ချေါလာခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒီကနေ သူတို့တှေ ရငျးနှီးကွပွီး Hung က သူကွီးပွငျးလာတဲ့အထိ Lily ကို အမွဲအိပျမကျမကျခဲ့တယျလို့ … Read more
စုံတှဲ တိုငျး ဘဝမှာ တဈကွိမျတော့ အတူတူလုပျသငျ့တဲ့ အရာမြား
စုံတှဲ တိုငျး ဘဝမှာ တဈကွိမျတော့ အတူတူလုပျသငျ့တဲ့ အရာမြား အခုနမှောမလုပျရငျ တဈခြိနျမှာ နောငျတရလာနိုငျတယျနျော။ ကိုယျ့မှာ ခဈြသူရညျးစား ၊အိမျထောငျဖကျ ရှိတယျဆိုလြှငျတော့ အနညျးဆုံး ဘဝ မှာ တဈကွိမျတော့ အတူတူလုပျသငျ့တဲ့ အရာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ တခြို့အရာတှကေ ငယျရှယျတဲ့အခြိနျမှာ မလုပျခဲ့လြှငျ အသကျကွီးသှားမှ ပွုလုပျတဲ့အခါ အနညျးငယျ ရှကျရှံစိုးရိမျဖှယျ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ၁။အပွနျအလှနျနှိပျပါ။ ကိုယျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကို နှိပျနယျပေးခွငျး က ခန်ဓာကိုယျ မှာရှိနတေဲ့ ဖိစီးမှုတှမှေနျသမြှကို ပွပြေောကျသှားစပေါတယျ။ ဒီလိုနှိပျပေးခွငျးက ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ အလေးပေးမှုကိုလညျး ပွနျလညျရစပေါတယျ။ ၂။အတူတူခကျြပါ။ နှဈဦးသား ဆကျဆံရေး မှာ ပိုပွီးပြျောရှငျစိတျလှုပျရှားဖှယျရာတှေ ဖွဈဖို့ဆိုလြှငျ နှဈယောကျအတူတူ ဟငျးခကျြပွုတျစားသောကျဖို့ကို မမသေ့ငျ့ပါဘူး။ ဒီလို အတူတူခကျြပွုတျခွငျးက နှဈဦးသားကို ပိုပွီးရငျးနှီးကာ ပြျောရှငျမှုရစသေလို စားသောကျဆိုငျတှမှော … Read more
ယောကျာ်း တစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး
ယောကျာ်း တစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီးဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁။ သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။ သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကပျော်ရွှင်ချင်ယောင် ဆောင်ပြဆောင်ပြ သင့်ရဲ့ဒုက္ခတွေ အခက်ခဲတွေကို … Read more
ချဲဖွင့်ခါနီးလို့ မိမိတို့လက်ဖ၀ါးမှာ ဒီသင်္ကေတ လေးပါနေလား စစ်ကြည့်ပါအုံး
သင် ဟာ လက္ခဏာဗေဒင်ကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို သိရမယ်ဆိုရင် လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ တစ်ချို့ဟောချက်တွေက မှန်တာတွေလည်းရှိသလို ၊ အချို့ဖြစ်မလာတဲ့ ကိစ္စလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်..။ ယုံကြည်သူဖြစ်စေ ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ဒီလို လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ X ရဲ့အဓိပ္ပာယ် – ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောပြချင်တာကတော့ မင်းဟာ ပြိုက်ဘက်ကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အနာဂတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ့် လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ရုရှား STI တက္ကသိုလ်မှပညာရှင်များ လေ့လာချက်အရ လူတွေရဲ့လက္ခဏာဖွဲ့စည်းပုံဟာ ရှုပ်ထွေးပေမယ့် များသောအားဖြင့် ဒီလို Xပုံစံပါတဲ့ လူတွေဟာ ပြိုင်စံရှားဖြစ်သလို အထင်ကရလူတွေအဖြစ်လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ် …။ ဒီလူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး တိတ်တဆိတ် နေတတ်ကြပါတယ်။ဒီလူတွေမှာ … Read more
အခုနောက်ပိုင်း တစ်ယောက်ထဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပိုနေဖြစ်လာတယ်…
အခုနောက်ပိုင်း တစ်ယောက်ထဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပိုနေဖြစ်လာတယ် ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားတွေအများကြီး မပြောချင်တော့ဘူး ကိုယ့်ဘက်ကစတဲ့ conversations တွေလည်း မပို့ဖြစ်တော့ဘူး ကိုယ့်အနားမနေချင်တော့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တကူတကလည်း ဆွဲမထားချင်တော့ဘူး ကိုယ့်ဆီက ထွက်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုလည်း ပြန်လာမှာပဲ ဆိုတဲ့ ‌မျှော်လင့်ချက်မျိုး မထားဖြစ်တော့ဘူး ကိုယ်ကစမှ ပူနွေးလာမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေလည်း လက်မခံချင်တော့ဘူး အခုနောက်ပိုင်း တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေတတ်လာပြီး သီချင်းဆွေးဆွေးလေးတွေ ပိုနားထောင်ဖြစ်လာတယ် စာအုပ်တွေ ပိုဖတ်ဖြစ်လာတယ် ရုပ်ရှင်တွေ ပိုကြည့်ဖြစ်လာတယ် စိတ်ရဲ့ ‌ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူတတ်လာတယ် Crd; လင်းဆစ်အိမ် အခုနောက္ပိုင်း တစ်ယောက္ထဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ် ပိုနျေဖစ္လာတယ် ဘယ်သူနဲ့မွလည်း စကားတြေအမ်ားကြီး မျေပာခ်င်တော့ဘူး ကိုယ့်ဘက္ကစတဲ့ conversations တြေလည်း မပိျု့ဖစ်တော့ဘူး ကိုယ့်အနားမေနခ်င်တော့တဲ့ လူတစ်ယောက္ကို တကူတကလည်း ဆြဲမထားခ်င်တော့ဘူး … Read more
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်လာအောင် နေထိုင်နည်း”
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်လာအောင် နေထိုင်နည်း” ကိုယ့်ရဲ့ဘဝက ဘယ်လောက်ထိ ချို့ယွင်းချက်တွေရှိနေပါစေ ချစ်နိူင်အောင် လက်ခံနိူင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဘဝကို သူများဘဝနဲ့ယှဉ်ပြီး အားမငယ်မိပါစေနဲ့။ လူတိုင်းက ဘဝပေးအခြေအနေအရ တစ်ခုခုကတော့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေဆိုတာ ပါလာပြီးသားပါ။ သူ့မှာလဲ သူ့အားသာချက်ရှိသလို အားနည်းချက်ဆိုတာလဲ ရှိပါတယ် ။ သူက သင်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ မတူညီနိူင်တာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး အားမငယ်လိုက်ပါနဲ့ ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အချက်တွေကို မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်မှာ တစ်ခုခုကတော့ အားသာချက်ဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ စကားမပြောတတ်တဲ့ သူအတွက် အားငယ်နေတာထက် အသက်ရှင်ရက်နဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံနေခြင်းက သူ့ရဲ့ အားသာချက်ပဲ မဟုတ်လား။ မိမိကိုယ်ကိုယ် မှမချစ်တတ်သေးရင် တစ်ပါးသူကို အချစ်တွေမျှဝေဖို့ မဖြစ်နိူင်ပါဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာက အရာရာကိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကြည့်နိူင်တာမျိုးပါ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်တောင်မှ … Read more
ချစ်သူ/လင်မယား အချင်းချင်း mutual respect လိုသလား?
ချစ်သူအချင်းချင်း mutual respect လိုသလား? လင်မယားအချင်းချင်း mutual respect လိုသလား? ဟုတ်ကဲ့ လိုပါတယ်… မတူညီတဲ့လူနှစ်ဦး တူတူသွားရမယ့်ခရီးမို့လို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန်လေးစားဖို့သိပ်လိုပါတယ် အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိရင် ‌ရှေ့ဆက်လို့မရပါဘူး… တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အထင်မကြီးရင် လက်တွဲလို့မရပါဘူး…. တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်မလေးစားဘဲ အပြစ်သာမြင်နေရင် တူတူသြားလို့မရပါဘူး….. ကျွန်တော်တို့တွေက တစိမ်းတွေပါ.. အတိတ်တွေမတူကြပါဘူး အတွေးတွေမတူကြပါဘူး အမြင်တွေကွဲပြားကြပါတယ်… တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါမယ် တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ ‌စေတနာတွေကို လေးစားရပါမယ် တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို နားလည်ပေးပြီး တက်နိုင်သလောက်ပြုပြင်ယူရပါမယ်.. ဒါဟာ mutual respect ပါ… ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့တွေရဲ့ အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူး သူတို့တွေရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို အထင်မကြီးခဲ့မိဘူး သူတို့တွေရဲ့ ဝါသနာတွေကိုပြက်ရယ်ပြုမိခဲ့တယ် သူတို့တွေရဲ့ စေတနာတွေ ကူညီမှုတွေ အနစ်နာခံပေးမှုတွေကို တန်ဖိုးမထားမိခဲ့ဘူး သူတို့အတွေးတွေကို … Read more
ကနျစှနျးရှကျ ၏ အလှအပဆိုငျရာ လြှို့ဝှကျခကျြ
ကနျစှနျးရှကျဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘကျပေါငျးစုံမှ အထောကျအကူဖွဈစရေုံသာမက၊ အသားအရညျကို ကောငျးမှနျသနျ့ရှငျး စလေို့ ပြိုပြိုမတေို့ အတှကျအကောငျးဆုံးအဖျော မှနျပါဘဲ။ (က) ဝကျခွံစို၊ ဝကျခွံခွောကျ၊ ဝကျခွံပုနျး၊ တငျးတိပျ၊ အမညျးစကျ မြားနှငျ့ မကျြနှာအသားအရေ အရောငျမညီခွငျးမြားအတှကျ စိတျမပကျြပါနှငျ့။ ကနျစှနျးရှကျကိုကွိတျခပြွေီး၊ ထိုသတ်တုရညျ တဈမြိုး တညျးကိုသာ စိတျခလြကျခလြိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ သကျသာလာစနေိုငျပါတယျ။ (ခ) ပြားရညျစားပှဲတငျဇှနျး ၁-ဇှနျး နှငျ့ ကနျစှနျးရှကျ သတ်တုရညျ စားပှဲတငျဇှနျး ၄-ဇှနျးကို သမေ အာငျရောမှကော ခွလေကျမြားကို လိုးရှငျးအဖွဈ နံကျ နှငျ့ ည ပုံမှနျလိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ အသား အရေ ဝငျးလကျစိုပွေ တောကျပလာစနေိုငျပါတယျ။ (ဂ) ကနျစှနျးရှကျ ကို အရညျညှဈ၍ ခေါငျးဦးရပွေားထဲ စိမျ့ဝငျအောငျ နှိပျနယျပေးခွငျးဖွငျ့ ဆံပငျသနျစှမျးကာအရှညျမွနျစပေါတယျ။ ဒါ့ပွငျဦးရပွေားကိုအေးမွစေ … Read more
ခကျြပွုတျဖို့တငျမဟုတျဘဲ သငျမသိသေးတဲ့ ဆားဖွငျ့ ဖွရှေငျးနိုငျသညျ့ အသုံးဝငျပုံ (၁၄ )မြိုး
ခကျြပွုတျဖို့တငျမဟုတျဘဲ သငျမသိသေးတဲ့ ဆားရဲ့ အသုံးဝငျပုံ (၁၄)မြိုး ဆားကို နှဈပေါငျး ၆ဝဝဝကြျောလောကျထဲက ကောငျးစှာအသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ အစားအစာတှေ ခကျြပွုတျဖို့အတှကျ အစားအစာအမြိုးမြိုးကို ထိနျးသိမျးဖို့အတှကျ၊မီးလောငျမှုကို ထိနျးခြုပျဖို့နဲ့ လြော့ခဖြို့အတှကျ စတဲ့အခွအေနအေမြိုးမြိုးအတှကျ ကယျြပွနျ့စှာ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက အစားအစာတှကေို ဘာ့ကွောငျ့ သယျယူပို့ဆောငျနိုငျသလဲဆိုတဲ့အဓိကအကွောငျးရငျးမြားထဲက တဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ဆားက နရောတိုငျးနီးပါးရနိုငျပွီး ဈေးပေါပါတယျ။ဆားကို ဒီထကျပိုပွီး ဘယျလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ အသုံးပွုလို့ရသေးသလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။ ၁။ အဝတျဟောငျးတှကေို အရောငျပွနျတငျတဲ့အခါအရောငျလှငျ့နတေဲ့ အဝတျဟောငျးတှကေို အသဈလိုတောကျပသှားအောငျ ဆားနဲ့ စမျးကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဆား ၄ပုံ၁ပုံထညျ့ထားတဲ့ ဆားရညျတဈခှကျထဲမှာ သငျအဝတျတှကေို စိမျပါ။ လြှျောပွီးသှားရငျ ရလဒျတှကေ အံသွစရာဖွဈလာမှာပါ။ ၂။ ပနျးတုတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့အခါ ပလတျစတဈအလှပနျးတှကေ ကွာကွာထားရငျ ဖုနျတှတေတျလာတတျပါတယျ။ ဒီပနျးအတုတှကေို သနျ့ရှငျးဖို့အတှကျ အလှယျနညျးကတော့ ပလတျစတဈအိတျထဲကို … Read more